Malezia: Manambara Ny Fanavaozana ny Lalàna Momba Ny Sivana Sy Ny Fahalalahana Maneho Hevitra Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2017 12:35 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka amin'ny Septambra 2011)
Manao zavatra amin'ny fotoana mety, ary manaiky ny fihetseham-po ankapobeny “tena misy”: izany mihitsy no nataon'i Najib Tun Razak, praiminisitra Maleziana, tamin'ny nanambaràny [amin'ny teny Anglisy ho toy ny rohy rehetra ato anatin'ny lahatsoratra], nandritra ny fankalazana ny ny fetim-pirenena, ny fanavaozana ny lalàna maromaro momba ny fiarovam-pirenena, ny sivana ary ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fivoriana.
Mety ho voasafidy tsara kokoa ny fotoana raha ny fahitana ilay famoretana natao tamin'ny hetsi-panoherana nokarakarain'ny vondrona Bersih 2.0 (manohana ny fifidianana tsy mitanila), tamin'ny Jolay, sy ny sahoan-dresaka amin'izao fotoana izao mikasika ny fifidianana ankapobeny izay ho avy. Ny haino aman-jery iraisam-pirenena, izay manakiana ny governemanta Najib amin'ny ankapobeny, dia nanova ny feony ihany koa ho amin'ny toerana tsy momba ny atsy na ny aroa ary mailo. Ny gazety Aziatika Wall Street Journal dia mankasitraka ny hetsika iray izay “manokatra ny varavarana ho amin'ny fanovàna politika lehibe”.
Tsy mahagaga ihany koa ny mahita ireo antoko mpiara-mitantana ao amin'ny governemanta sy ireo gazety mpiseho isan'andro ao amin'ny firenena midera io fihetsika io amin-kafanam-po, raha ny antokon'ny mpanohitra tarihin'i Anwar, fahavalo politika voalohan'i Najib, mitsikera miaraka ireo hadisoany ary miantso fahamailoana.
Mpanao gazety tsy miankina ao amin'ny aterineto, maka ilay fihetsika malina ihany koa i Anil:
Aloha loatra raha izao no mifaly. Tena zava-dehibe tokoa ny mahafantatra izay hisolo ireo lalàna mamoritra ireo […] Ary ahoana ny momba ireo lalàna faneriterena hafa toy ny Lalàna momba ny fikomiana, ny Lalàna momba ny tsiambaratelom-panjakàna, ny lalàna momba ny Anjerimanontolo sy ny sekoly ambaratonga ambony? Afaka manao ireny akanjon'ireo “Bersih” mavomavo ireny amin'izay ve isika rehetra ary mifaly amin'ilay fanambarana nataon'ny Praiminisitra ka tsy ho voaroaka tsy misy indrafo?
Na mbola tsy naely aza ny antsipirihan'ny fanavaozana ireo lalàna ary mbola tokony ho dinihina amin'ny taona ho avy eny anoloan'ny Parlemanta ireo fanovana, Ahirudin, mpitoraka blaogy mavitrika, dia tapa-kevitra ny hamerina any amin'i Kaisara izay an'i Kaisara tamin'ny alalan'ny fanoratana hoe:
Androany, 16 Septambra 2011, dia hitoetra eo amin'ny tantara ho andron'i Najib Razak. Tsy nisy nanam-po ny hahasahian'ny Praiminisitra Malezia fahenina handray an-tànana ny Lalàna momba ny fiarovam-pirenena. […] Fihetsika nampangiana tanteraka ireo mpifanandrina ara-politika aminy efa zatra nanao fanambarana henjana |…] Ary isika, Maleziana, tsy maintsy mifaly.
Ny holafitr'ireo Maleziana mpisolovava, izay ao anatin'ny vondrona manome ny ankamaroan'ireo vato manohana ilay fanafoanana ny Lalàna momba ny filaminana anatiny, izay manome alàlana ny fanagadràna tsy misy fitsarana, dia niarahaba tena noho ilay hetsika no sady nitandrina ihany:
Ny fikambanan'ny Maleziana mpahay lalàna, holafitry ny mpisolovava ao Sarawak sy Sabah, dia mitovy hevitra amin'ny hoe tsy mila lalàna manome alalana ny fanagadràna tsy misy fitsarana mialoha i Malezia satria ny firenena efa nanamafy orina ny lalàna mba handraisana an-tànana ny fandrahonan'ny mpampihorohoro. […] Na ekena aza ny fampanantenana nataon'ny Praiministra, tsy ho azo tsapain-tànana izany raha tsy efa fantatra ny antsipirihany, ary tsy heverina ho toy ny tanteraka raha tsy efa ampiharina. Noho izany, antsoinay ny Praiministra hitondra ilay lalàna hiadian'ny daholobe hevitra sy hanaovana latsabato, ary koa hanome tetiandro hametraka mazava tsara ny fanatanterahana ireo fampanantenana ireo.
Manolotra andianà fanehoankevitra avy aminà olomalaza maro goavana ara-politika ao amin'ny firenena koa ny bilaogy Free Malaysia Today, anisan'izany indrindra S Ambiga, mpitarika ny hetsika Bersih 2.0, izay milaza hoe:
Tsy lasa lavitra loatra ireo fanavaozana sasantsasany, toy ny Lalàna momba ny asa fanaovan-gazety an-tsoratra sy ny famoahana gazety, satria mbola ilaina foana ny fahazoandàlana vao afaka mamoaka ary mifanohitra amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety izany. Ny fanambaràna fa tsy homena alàlana ireo fihetsiketseham-bahoaka dia mmifanohitra ihany koa amin'ny zo hanao fivoriana. Manantena aho fa mbola afaka resahana mialoha be kokoa ireo teboka ireo.
Rehefa tonga ny fotoana hitsaràna ny hetsika nataon'i Najib amin'ny fiafaràn'ny fitondrany, dia hotsaroana ho toy ny “mpitondra fanavaozana” tsy nitarazoka tamin'izay ho vokatra ara-toekarena sy ara-politikan'ny fihetsiny izy. Izany no tanjona efa napetrany nanomboka hatramin'ny fanendrena azy ho Praiminisitra, tamin'ny nanombohany naka fepetra maromaro fanalalahana izay nitarika ny fampidirana ny Lasitra Ara-toe-karena Vaovao [amin'ny teny frantsay]. Ny tatitra vao haingana nataon'ny Gazety boky Forbes, izay ahitana, ohatra, fa “nametraka azy ho amin'ny làlana marina amin'ny fahazoana ny satan'ny firenena mandroso ny politika mahagaga mipetraka ao Malezia” dia tsy nanao afa-tsy ny nanamarina ny hetaheta ara-toekaren'i Najib sy ny faniriany hanana laza tsara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny tantara irery ihany no hilaza raha ho vitan'i Najib ny hanatanteraka ny nofinofy politikany.
Maribolana amin'ny sary: Fankalazana ny fetim-pirenena Maleziana tamin'ny 16 Septambra 2011. Sary navoakan'iesharkj tao amin'ny Flickr ary nampiasàna ny fanomezan-dàlana Creative Commons (CC BY 2.0).